Iindlela ezi-4 eziChaphazelekileyo kulo nyaka kuMxholo weDijithali | Martech Zone
NgeCawa, Oktobha 4, 2015 NgoMvulo, Oktobha 5, 2015 Douglas Karr
Siyavuya kakhulu ngokuza kwethu I-webinar eneMeltwater kuMxholo kunye neehambo zabaThengi. Yikholwe okanye ungakholelwa, umxholo wentengiso uye kwaye uyaqhubeka nokuvela. Kwelinye icala, indlela yokuziphatha yabasebenzisi iguqukile kwindlela umxholo osetyenziswa ngayo kunye nendlela umxholo oluchaphazela ngayo uhambo lwabathengi. Kwelinye icala, iidemon ziye zavela, ukukwazi ukulinganisa impendulo, kunye nokukwazi ukuqikelela ukuthandwa komxholo.
Qiniseka ukuba bhalisa kwi-webinar! Siza kuhambisa i-ebook yam yamva nje kuye wonke umntu oya.
Khohlwa ukuzama ukugcina lonke utshintsho olwenzekileyo kwintengiso ye-Intanethi kulo nyaka uphelileyo. Kuya kuthatha kuwe ukuza kuthi ga ngeli xesha kunyaka olandelayo ukuba udwelise. Ke endaweni yokuthatha ixesha elininzi elingafunekiyo kunye nexabiso, lakutshanje infographic evela kwiNtengiso ye-MDG Ngokukhawuleza iinkcukacha zemixholo yomxholo oyifunayo.
I-MDG ifumene isitshixo esi-4 iintsingiselo ezichaphazela ukuthengiswa komxholo wedijithali amacebo:
Umsebenzisi ngoku ulawula ngokusemthethweni, kunye nokunye abalamli njengepodcasting ziyakhula.
Ividiyo isetyenziswa ngakumbi nangakumbi kwi Iselfowuni.
Ukubhloga ngokudibeneyo iyaqhubeka nokuba kwiziko leqhinga eliyimpumelelo lomxholo wedijithali.
Intengiso ibonelela ngamathuba amatsha kunye nokuqaqambisa okwazisa ngomxholo wakho.
tags: 2015umxholo womxholoUmxholo wedijithaliumxholo wedijithali